Hiob 32 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Aberante Elihu de n’ano too asɛm no mu (1-22)
Ne bo fuw Hiob ne Hiob nnamfo no (2, 3)
Ɔde obu twɛnee ansa na ɔrekasa (6, 7)
Ɛnyɛ mfe nko ara na ɛma nyansa (9)
Elihu repɛ ntɛm akasa (18-20)
32 Ɛno nti, mmarima baasa yi anhaw wɔn ho sɛ wɔne Hiob bɛka biribiara bio, efisɛ na Hiob gye ne ho di sɛ ɔyɛ ɔtreneeni.*+ 2 Ɛnna Busni+ Barakel a ofi Ram abusua mu no ba Elihu bo fuwii paa. Ne bo fuw Hiob sɛ wabu ne ho* ɔtreneeni asen Onyankopɔn.+ 3 Hiob nnamfo baasa no nso, Elihu bo fuw wɔn paa, efisɛ wɔannya asɛm papa biara anka, na mmom wɔkae sɛ Onyankopɔn yɛ ɔbɔnefo.+ 4 Ná wɔn nyinaa anyin kyɛn Elihu, enti na ɔretwɛn ama wɔn ano asi ansa na ɔne Hiob akasa.+ 5 Bere a Elihu hui sɛ mmarima baasa no nni asɛm biara ka bio no, ne bo fuwii. 6 Enti Busni Barakel ba Elihu fii ase kasae, na ɔkae sɛ: “Minnyinii,*Na mo de, moyɛ mpanyimfo.+ Obu a mewɔ ma mo nti, mankasa,+Na na misuro sɛ mɛka nea minim akyerɛ mo. 7 Mekae sɛ, ‘Ma wɔn a wɔanyin* nkasa,Na mfe dodow nkyerɛkyerɛ nyansa.’ 8 Nanso ɛyɛ honhom* a ɛwɔ nnipa mu,Ade nyinaa so Tumfo no home na ɛma wonya ntease.+ 9 Ɛnyɛ mfe* nko ara na ɛma nyansa,Na ɛnyɛ wɔn a wɔanyin nko ara na wonim nea eye.+ 10 Ɛno nti nea mereka ne sɛ, ‘Tie me.Na me nso mɛka nea minim akyerɛ wo.’ 11 Hwɛ! Matwɛn mo nsɛm.Bere a morehwehwɛ biribi aka nyinaa,+Meyɛɛ aso tiee nea moreka no.+ 12 Meyɛɛ komm tiee mo,Nanso mo mu biara antumi ammɔ Hiob asɛm no angu,*Na obiara antumi amma no mmuae wɔ n’asɛm no ho. 13 Enti monhwɛ na moanka sɛ, ‘Yɛahu nyansa;Ɛyɛ Onyankopɔn na wateɛ n’adwene, na ɛnyɛ onipa.’ 14 Hiob nkasa ntiaa me,Enti nsɛm a mokeka kyerɛɛ no no, merenka bi nkyerɛ no. 15 Wɔabɔ* hu, wonni asɛm biara ka bio;Wɔn anom asɛm asa. 16 Matwɛn ara, nanso monkasa bio;Mugyinagyina hɔ saa, na monka hwee bio. 17 Enti me nso mɛka bi;Me nso mɛka nea minim. 18 Efisɛ nsɛm ahyɛ me ma;Honhom a ɛwɔ me mu no rehyɛ me. 19 Mete nka wɔ me mu te sɛ bobesa a wɔakata ano denneennen;Mayɛ sɛ nsã kotoku foforo a ɛreyɛ apae.+ 20 Momma menkasa na me ho ntɔ me! Mebue m’ano na makasa. 21 Merenyɛ nnipa mu nyiyim,+Na merennɛfɛdɛfɛ onipa biara.* 22 Efisɛ minnim sɛnea wɔdɛfɛdɛfɛ nkurɔfo;Meyɛ saa a, anka me Bɔfo beyi me afi hɔ ntɛm.
^ Anaa “efisɛ na Hiob teɛ wɔ ɔno ara n’ani so.”
^ Nt., “Nna a madi nnɔɔso.”
^ Nt., “Ma nna.”
^ Anaa “Onyankopɔn honhom.”
^ Nt., “nna.”
^ Anaa “antumi anka Hiob anim.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛha yi de, Elihu ne Hiob na ɛrekasa.
^ Anaa “meremmɔ onipa biara mmran; meremfa m’ano mfa onipa biara ho.”